Prachanda Man Shrestha Biography | Hamro Kalakar
Biography last updated: 9th Nov, 2017
Facts of Prachanda Man Shrestha
Newari, Thai, japanese Food
Contact Prachanda Man Shrestha
Suggestion for Prachanda Man Shrestha
Prachanda Man Shrestha is Director, Script Writer, Producer. He was born on 17th January in Nuwakot. His horoscope is Capricorn. His marital status is Married. His height is5feet6inches. His favorite color is Purple, favorite movie is Kalo Pothi, favorite music is Yo Samjhine Man Chha, favorite food is Newari, Thai, japanese Food, favorite place is Pokhara.
पुरानो थातथलो त्रिसुली भए पनि प्रचण्डमान काठमाडौंमा हुर्किए । उनका बुवा आमाको पनि चाहाना फरक थिएन आम अभिभावकको भन्दा । डाक्टर वा इन्जिनियर मध्यै एक बन्नु पर्छ भन्थे । उनलाई भने खासै लगाव थिएन । राम्रो अंक ल्याएका उनी एसएलसी पछि अमृत साइन्स क्याम्पसमा भर्ना भए । तर, सँगै उनी मानविकी पनि पढ्न थालेका थिए । दुवैलाई उनले सँगसँगै अगाडि बढाए ।
चलचित्रप्रति उनको विशेष झुकाव थियो । चलचित्रले सँधै तान्थ्यो उनको मनमस्तिष्क । कक्षा ७ मा पढ्दा देखि नै उनले नाटक लेख्न थालेका थिए । ७ कक्षमा पढ्दा ७÷८ रुपैयाँ पर्ने नेपाली कपी उनले नाटक लेखेर भरेका थिए ।
एसएलसी पछि उनले बुवासँग आफूलाई फिल्म पढ्न भारतको पुर्णेमा पठाइदिन अनुरोध गरे । तर, उनको बुवाले डाक्टर वा इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनेपछि उनले पहिलो पाइला नै त्यतातर्फ चाल्न सकेनन् ।
उनको परिवारको साइबर क्याफे थियो ठमेलमा । त्यही बस्थे । फुर्सदको समय वेभसाइट डिजाइन गर्न खोज्थे । साइबर फिल्म स्कुल डकटम नामक वेभसाइटमा फिल्मको अध्ययन गर्न थाले । स्क्रिप्ट कसरी लेख्ने, फिल्म कसरी बनाउने यस्ता कुरारहरु उनी महिनौसम्म पढ्थे ।
उनलाई अब काम पनि गरेर हेर्नु पर्यो भन्ने लाग्यो । टेलिचलचित्रको स्क्रिप्ट लेख्न थाले । वेभसाइटमा उनले नाम खोज्न थाले । साउथ एसियाको नेपाल सर्च गर्दा त्यहाँ उनले चार वटा नाम भेटे ।
त्यसमध्ये एक जना न्युजिल्यान्ड गइसकेका रहेछन् । अर्को एक जना पनि फेला परेनन् । दीपक बज्राचार्यको लेन्डलाइन नम्बरमा फोन गरे । तर, उनी पनि सरिसकेको घरभेटीले जानकारी दिए । चौथो नाम थियो, सूर्यनारायण श्रेष्ठ । उनलाई फोन गरे । चलचित्रमा आफूलाई लगाव रहेको बताउँदे आफूले उनलाई भेट्न चाहेको बताए ।
पीएसआईमा काम गर्ने श्रेष्ठले फोनमार्फत खोजि गरेको देखेर छक्क पर्दै भेट्न राजी भए । हिमालयन जाभामा भेट भयो । प्रशन्न बज्राचार्यले कान्तिपुर टेलिभिजनमा ‘हाउसफुल’ नामक टेलिचलचित्र बनाइरहेका थिए । प्रचण्डमानलाई श्रेष्ठले बज्राचार्यसँग भेटाइदिए । काम सुरु भयो । उनले ‘हाउसफुल’ को आठ वटा श्रृखलाको कथा लेखे ।
सूर्यमान श्रेष्ठसँग सम्बन्ध विस्तार भयो । श्रेष्ठ र प्रचण्डमान मिलेर ‘क्याफे कान्तिपुर’ बनाए । सुरुका ५ वटा श्रृखला सूर्यमानले निर्देशन गरेको ‘क्याफे कान्तिपुर’ को बाँकी २१ श्रृंखला प्रचण्डमानले निर्देशन गरे । यसरी प्रवेश भयो उनको काँचको पर्दाको यात्रा ।
प्रचण्डमानलाई रहर चलचित्र बनाउने नै थियो । तर, उनी सुरुमा टेलिचलचित्र बनाउन पुगे । त्यहाँबाट उनले स्क्रिप्ट र निर्देशन सिके । यूएसएआईडीले एचआईभी सम्बन्धी बनाउन भनेको थियो । त्यो प्रतिस्पर्धामा उनी पनि थिए । सँगै थिए, आसिफ शाह, अभिनास विक्रम शाह लगायत पनि ।
अभिनासको फिल्म सिमोस सुनुवारले सम्पादन गरेका थिए प्रचण्डमानको फिल्म सुवास अर्यालले सम्पादन गरे । प्रचण्डमानलाई अभिनासको फिल्म आफ्नोभन्दा मन पर्यो । तर, सिमोसलाई प्रचण्डमानको सिनेमा मन परेको थियो । त्यो समयपछि सिमोस र प्रचण्डमान क्लोज भए । बेला बेलामा भेट हुन्थ्यो । एक दिन सिमोसले प्रचण्डमानलाई भने, “म सँग फस्ट लभ भन्ने फिल्मको स्टोरी आएको छ त्यसलाई हेर्दिने हो ?” उनले हुन्छ, भने ।
चलचित्र ‘फस्ट लभ’ को कथा कसले लखेको हो ? प्रचण्डमानलाई अहिले पनि थाहा छैन । त्यसको केन्द्रिय भाव नमर्ने गरी उनले ७० प्रतिशत रि–राइट गरेर स्क्रिप्ट तयार गरे । त्यही चलचित्र हिट भयो ।
चलचित्र निर्माणका लागि अराजक कलात्मकताको आवश्यकता चाहिन्छ । त्यो उनलाई थाहा थियो । ‘लबशासा’को स्टोरी उनले पहिला नै सोचेका थिए । तर, सायद त्यो समय दर्शक ‘लबशासा’को स्टोरी हेर्न तयार भइसकेका थिएनन् । त्यसैले उनले बनाएर त्यतीबेला ‘भिजा गर्ल’ । ‘भिजा गर्ल’ पनि त्यो समयको फरक खालको चलचित्र नै थियो । नयाँ प्रयोग नै थियो ।
Prachanda Man Shrestha Photo Gallery
Prachanda Man Shrestha Videos
✓ Nitin Chand
✓ Araj Keshav Giri
✓ Nischal Basnet
Sitaram Kattel (Dhurmus)
Manoj K. Marodia
Bimal Man Gubhaju